Bogga ugu weyn Faallooyinka Caymiska Guud ee Qaranka 2021 | Xalaal Mise Fadeexad?
Waa maxay Caymiska Guud ee Qaranka?
Maxaan U Adeegsanayaa Caymiska Guud ee Qaranka?
Sidee buu u shaqeeyaa Caymiska Guud ee Qaranka?
Waa maxay Caymiska Baabuurka Caymiska Guud ee Qaranku Bixiyaa?
Waa Maxay Kharashyada Iyo Dhimisyada Ay Bixiyaan Caymiska Guud Ee Qaranka?
Sideen U Heli Karaa Shirkadda Caymiska Guud Ee Qaranka Oo Igu Dhow?
Faa’iidooyinka iyo Qasaaraha Shirkadda Caymiska Guud ee Qaranka
Caymiska Guud ee Qaranku Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad?
Dad badan ayaa ku dhacay khiyaamo iyo shirkado caymis oo sharci -darro ah qaarkoodna xitaa waxay ka laabteen inay bilaabaan safarkii la dabooli lahaa haddii ay timaad xaalad degdeg ah iyo hubsiimo la’aan. Sidaa darteed, weedha ah, “mar laba jeer la qaniinay laba xishood” ayaa imanaysa in la ciyaaro laakiin, ma hoos baa loo dhigaa ama ma diidaa in la caymiyo ikhtiyaarka ugu fiican ee la tixgeliyo? Waxaa jira shirkado caymis oo sharci ah oo dabooli kara gurigaaga, ganacsigaaga, iyo baabuurtaada iyo kuwo kale. Mid ka mid ah shirkadahaasina waa Caymiska Guud ee Qaranka.
Dib -u -eegistayada Caymiska Guud ee Qaranka, waxaan ku siinnaa macluumaad muhiim ah oo kugu hagaya inaad ogaato inay tahay Fadeexad ama Sharci iyo sidoo kale faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka iyo sida lagu dabooli karo.
Caymiska Guud ee Qaranku waa urur ka iibiya siyaasadaha darawalada halista badan, gaar ahaan kuwa leh DUI dambi ku jira diiwaankooda. Siyaasadeeda ayaa si ballaaran looga heli karaa intarneedka iyo wakiillada madaxa bannaan waxayna bixisaa dhowr qorshe iyo qiimo dhimis.
Markii hore loo yaqaanay Caymiska GMAC, shirkadda waxaa la aasaasay sannadkii 1920 -kii, bilowgii waxay caymis u fidisay macaamiisha GM, tan iyo markaas waxay baalasheeda baratay oo weynaatay si ay u noqoto mid ka mid ah shirkadaha caymiska ee ugu waawayn Gobolka Maraykanka.
Caymiska Guud ee Qaranka wuxuu alaabtiisa ku iibiyaa in ka badan 10,000 wakiil oo madax -bannaan iyo dallaaliin ku baahsan Mareykanka In kasta oo ay bixiso noocyo kale oo ah caymisyada caymiska sida Condo, RV, Mulkiilaha Guryaha, Ganacsiyada Yaryar, Mootooyinka, iyo Kiraystayaasha waxaa si weyn loogu yaqaan iibinta caymiska baabuurta.
Akhri ALSO: Sida Loo Sameeyo Lacag Dheeraad ah oo Uber Lagu Wado Sabtiyada iyo Axadaha
Sida lagu sheegay warbixinta dheelitirka, Caymiska Guud ee Qaranka wuxuu leeyahay hanti iyo khasaare caymis guud oo qoran oo ah $ 1,316.9 milyan, kaas oo caafimaadkiisa iyo shilkiisa guud ee caymiska oo kordhay 12.9% sannadkii hore ilaa $ 162.6 milyan. Dakhliga maalgashigu sidoo kale wuxuu gaaraa $ 33.5 milyan, marka la barbardhigo $ 31 milyan sanadkii hore. Caymiska Guud ee Qaranku wuxuu haystaa saamiga suuqa 1.05% ee suuqa caymiska baabuurta ee Maraykanka oo leh $ 2,236,697 oo ah lacag -bixinno toos ah oo qoran, oo dhigaya 17 -ka 25 -ka ee caymiska baabuurta ee Maraykanka oo lagu qiimeeyay saamiga suuqa.
Haddii aad rabto inaad dejiso dhammaan siyaasadahaaga caymis oo ku hoos jira hal bixiye, National General wuxuu bixiyaa xirmo xirmo sida siyaasado dheeri ah oo loogu talagalay RV -yada, ganacsiyada yaryar, caymiska baabuurka, mootada, iyo caymiska caafimaadka. Adigoo wata SmartValet shil kadib, waxaad heli doontaa baabuurkaaga sidoo kale waxaad heli doontaa baabuur kiro ah kadib markaad gudbiso dalab. Intaas kuma ekaane; baabuurkaaga ayaa la keeni doonaa ka dib marka la dayactiro oo Janaraalka Guud ee Qaranka ayaa ku soo celin doona gaarigaaga.
Sababtoo ah awoodda ay u leedahay inay ka soo baxdo waajibaadkeeda maaliyadeed, Caymiska Guud ee Qaranka waxaa lagu qiimeeyaa A+ (Aad u Wanaagsan) qiimeynta AM Best Insurance iyo sidoo kale Better Business Bureau (BBB). Intaa waxaa dheer, websaydhkeeda, waxaad ka heli kartaa xigasho, iyo sidoo kale bixinta biilkaaga gabi ahaanba. Waxa kale oo ku jira xarun waxbarasho oo adeegsadayaashu wax badan ka baran karaan mowduucyada sida arrimo saameeya qiimayaasha, ikhtiyaarada daboolista, shuruudaha caymiska aasaasiga ah, iyo kuwo kale oo badan.
Caymiska Guud ee Qaranka wuxuu bixiyaa sheegashooyin aad dhif u tahay inaad ka hesho shirkadaha caymiska kale. Waxay leedahay dammaanad-celin lacageed oo dhan ilaa $ 250 haddii aadan ku qanacsanayn hannaanka sheegashadiisa. Haddii aad ka fog tahay guriga waxay leedahay siyaasad hubinaysa in laguu soo celiyo kharashyada safarka degdegga ah
ARAG SIDOO KALE: Maxay Caymiska Baabuurku ugu qaalisan yihiin 2021?
Marka laga reebo Washington, Caymiska Guud ee Qaranka ayaa ruqsad u haysta inuu siiyo caymiska baabuurta dadka deggan dhammaan 50 -ka gobol. Si kastaba ha ahaatee, daboolkiisa, qiimihiisa, iyo sicir -dhimistu way kala duwan tahay iyadoo ku saleysan goobta. Waxaad la xiriiri kartaa wakiilka Caymiska Guud ee Qaranka si aad u aragto ikhtiyaarada caymiska ee laga heli karo agagaarkaaga ka hor intaadan dooran midka kugu habboon. Waxa kale oo aad ka heli kartaa xigasho caymiska baabuurka boggooda internetka adoo siinaya macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan iyo baabuurkaaga sida:
Qaabka, sanadka, iyo samaynta gaadhigaaga
Qiyaasta Mileage Sanadlaha ah
Laga soo bilaabo Dib -u -eegista Caymiska Guud ee Qaranka illaa hadda waxaan awoodnay inaan aragno sida ay u shaqeyso sidaas darteedna waa lagama maarmaan inaan falanqeyno nooca dalabyada laga heli karo Caymiska Guud ee Qaranka.
Akhri ALSO: Caymiska Baabuurka jaban ee Darawalada Cusub ee ka yar 25 sannadka 2021
Caymiska Guud ee Qaranka wuxuu bixiyaa badbaadin asaasi ah marka ay isku dhacaan, laakiin sidoo kale waad ku dari kartaa caymis si aad baabuurkaaga wax uga beddesho.
Hoos waxaa ah noocyada caymiska baabuurka ee aad ka heli karto Generalka Qaranka:
Masuuliyadda Burburka Hantida: kani wuxuu daboolayaa waxyeellada shilka ee uu sababay baabuurkaaga qof kale hantidiisa.
Shil: Waxay dabooshaa kharashka waxyeellada gaadhigaaga iyadoon loo eegin cidda sababtay shilka.
Mas'uuliyadda dhaawaca jirka: wax ka qabta kharashka haddii aad dhaawacdo qof shil galay.
Comprehensive: Waxay dabooshaa waxyeellada gaadhigaaga oo ka timaada khasaare sida tuuganimo ama kharribaad, daad, roob -dhagax, iyo Dabka.
Ilaalinta dhaawaca shakhsiyeed (PIP): Sharci ahaan gobollo badan ayaa looga baahan yahay, PIP oo sidoo kale loo yaqaan caymis aan khalad lahayn ayaa caawisa bixinta daryeelka caafimaadka, mushaharka lumay, ama adeegyada beddelka haddii shil dhaco iyadoon loo eegin cidda khaladka gashay.
Daboolida qalabka dheeraadka ah: Waad beddeli kartaa siyaasaddaada si aad ugu darto daboolidda wax -ka -beddelka giraangiraha caadada ah, qaswadayaasha, iyo baararka duudduuban.
Waxa kale oo ay bixisaa kharashyada caafimaadka ee adiga iyo rakaabkaaga marka shil dhaco.
Sida shirkado kale oo badan oo caymis baabuur ah, Qiimaha Guud ee Qaranka ee caymiskaaga caymisku wuxuu ku xiran yahay qodobo ay ka mid yihiin jinsiga, da'da, iyo diiwaanka wadista iyo sababta oo ah waxay ujeeddadeedu tahay macaamiisha leh diiwaannada wadista baabuurta oo kaamil ah, qiimaheedu wuxuu aad ugu sarreeyaa celceliska warshadaha oo markaa haddii aad raadinayso ikhtiyaarka ugu fiican waxaad ka iibsan kartaa caymisyada kale.
Hoos waxaa ah qiimo dhimisyada laga heli karo Caymiska Guud ee Qaranka:
Tuug-diidka Waxaad heli kartaa sicir-dhimis haddii baabuurkaagu leeyahay nidaam ka-hortagga dheef-shiidka.
Cafiska shilka: Caymiska Guud ee Qaranka ayaa had iyo jeer ka tanaasulaya ganaaxyada caadiga ah ee hal shil oo qalad ah, laakiin, waa inaad joogtaa shil iyo xadgudub la'aan ugu yaraan 12 bilood oo aan lahayn safar weyn saddex sano gudahood si aad ugu qalanto.
Baabuur badan: Ku xidh baabuurtaada ilaa 20% qiimo dhimistaada. Oo haddii baabuurkaaga iyo RV ay isku shil ku jiraan, waxaad bixin doontaa kaliya hal laga jari karo.
SmartDrive: iyada oo la adeegsanayo barnaamijka SmartDrive shirkadu waxay la socotaa xirfadahaaga wadista iyo wadista badbaadsan, qiimahaaga ayaa laga yaabaa inuu yaraado waxaadna kasban kartaa dhimis wadid 5% haddii aad go'aansato inaad adeegsato barnaamijka.
Masaafada Hoose: Sicir -dhimistani waxay u furan tahay kuwa kaxeeya wax ka yar 15,000 mayl sannadkii oo sidaas oo kale, waxay ku dhimi karaan lacagtaada ilaa 54%.
Xirmada: waa qaddarin in la helo noocyo badan oo caymis ah sida baabuur, ganacsi, iyo caymiska guriga.
Darawal ammaan ah: Qaar ka mid ah gobolada, dhammaystirka koorsada wadista difaaca ayaa hoos u dhigi karta lacagtaada.
Xubinnimada kooxda: haddii aad taageerto meherado xiriir la leh Caymiska Guud ee Qaranka, waxaad heli doontaa qiimo dhimis.
Si loo soo koobo, maadaama ay ku xiran tahay GM, Caymiska Guud ee Qaranka ayaa isna siiya qiimo dhimis dheeraad ah macaamiisha GM, darawalada, shaqaalaha hadda iyo kuwii hore, iyo waliba qoysaskooda.
Caymiska Guud ee Qaranka wuxuu leeyahay shabakad wakiilo oo ku baahsan daafaha dunida, qaar waxay ka shaqeeyaan xafiiska shirkadda halka kuwa kalena ay u shaqeeyaan si madax bannaan. Si aad u hesho oo ula xiriirto wakiil kuu dhow, raac tallaabooyinka hoose:
Tag websaydka Caymiska Guud ee Qaranka, guji caymiska baabuurka ee baarka sare ee maraakiibta, Ka dib markaa waxaad arki doontaa sanduuq xigasho oo ku yaal dhinaca raacitaanka bogga, guji hel wakiil, geli lambarkaaga Zip, wakaaladda raadinta magacow ama geli magaaladaada iyo gobolkaaga, intaas ka dib liistada wakiillada kuu dhow ayaa la soo bandhigi doonaa oo waad fiicantahay inaad tagto.
Akhri ALSO: Caymiska Baabuurka Ku -meelgaarka ah ee USA: Sida ay u Shaqayso | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Wuxuu caymiyaa darawalada halista badan: Si ka duwan shirkadaha kale ee caymiska baabuurta ee aan ku siin doonin caymis haddii aadan lahayn diiwaan dhammaystiran, National General ayaa weli ku siin doona caymis.
Adeeg gaar ah oo aad u fiican: National General wuxuu bixiyaa adeegyo dhif ah oo laga helo shirkado kale oo caymis oo badan.
Dammaanadda adeegga sheegashooyinka: Shirkaddu waxay bixisaa lacag -celin ilaa $ 250 haddii aadan ku qanacsanayn adeegga sheegashadeeda.
Sicir -dhimis baaxad leh: Adigoo wata General -ka Qaranka, waxaad ku kaydin kartaa ilaa 50% ama ka badan qiimahaaga qiimo dhimis la bixiyay. Intaa waxaa dheer, macaamiisha GM ama shaqaalaha waxay dhaliyaan qiimo dhimis dheeraad ah.
Siyaasadaha waxaa laga heli karaa internetka gobolada qaarkood: Gobollada qaarkood ee Maraykanka waxaad ka heli kartaa xigasho oo aad ka iibsan kartaa siyaasaddaada onlayn, taas oo kuu oggolaanaysa inaad si dhakhso ah u hesho caymis.
Foomamka SR-22 waa la heli karaa: Gobollada qaarkood darawalada laga xayuubiyey mudnaanta darawalnimada waxaa laga yaabaa in looga baahdo inay soo gudbiyaan foomka SR-22, Shahaadada Mas'uuliyadda Maaliyadeed. Foomku wuxuu cadeynayaa inaad buuxisay shuruudaha ugu yar ee mas'uuliyadda. Haddii loo baahdo, Caymiska Guud ee Qaranka ayaa ku xereyn doona SR-22 hay'adda shatiyeynta gobolka.
Habka sheegashooyinka gaabis ah: Macaamiisha ayaa inta badan ka cawda bixinta lacag -sheegashada ee shirkadda oo gaabis ah iyo adeegga macmiilka oo liita.
Qiimaha saldhigga qaaliga ah: Sababtoo ah Caymiska Guud ee Qaranka waxaa loogu talagalay darawalada halista badan, sicirkiisu wuxuu u eg yahay inuu ka sarreeyo celceliska warshadaha. Haddii aad haysato diiwaanka wadista oo nadiif ah, waxay u badan tahay inaad meel kale ka heli karto qiime aad u yar.
Siyaasadda lagama heli karo Gobolka Washington: Taas macnaheedu waa in dadka deggan Washington aysan ka iibsan karin siyaasad Shirkadda Caymiska Guud ee Qaranka.
Post laxiriira: Sida Loogu Iibiyo Baabuurkaaga Craigslist Iyadoon La Isdabamarin
Iyada oo ay jiraan shirkado caymis oo halkaas ka jira ayaa aad u fudud in mid ka mid ah uu ku dhaco khiyaamo, halka qaar badan ay leeyihiin dhibbanayaal dhicis ah taas oo ka dhigaysa inay ka shakiyaan shirkadda caymiska ee sharci ah. Waxaan falanqayneynaa Caymiska Guud ee Qaranka si aad u ogaato inay sharci tahay iyo inay khiyaamo tahay.
Marka hore, Jeneraalka Qaranka waxaa lagu qiimeeyaa A+ qiimeynta maaliyadeed ee ugu fiican ee AM taas oo caddeyn ku filan u noqon karta inay soo celiso sheegashada macaamiisha. Sanadkii 2021 waxay ka heshay A+ qiimeynta Better Business Bureau (BBB) ​​iyo BBB waxaa la aqoonsaday ilaa 1960.
Shirkaddu waxay dhalisay 2 ka mid ah 5ta xiddigood qanacsanaanta guud oo ay ku jiraan adeegyada sheegashada, ogeysiiska khasaaraha, qiyaasidda, iyo dejinta dayactirka, waxay sidoo kale ku qiimeysay 4 xiddigood 5 xiddig waayo -aragnimada kirada, laga yaabee inay tahay adeeggeeda bakhaarka.
Si kastaba ha noqotee, Waxay ku dhalisay 5.64 qiimeynta cabashooyinka Guddiyada Qaranka ee Caymisyada, heerka shirkadu waa 1.00, taasoo muujineysa in caymisku helo cabashooyin aad uga badan kuwa caadiga ah baaxaddiisa ganacsi, marka hubi inaad sameysid cilmi -baaris habboon iyo natiijooyin, si taxaddar leh u miisaam xulashadaada iyo xeerarkeeda ka hor intaadan dooran shirkadda caymiska inay maal gashato.
Haddii aad tahay darawal khatar badan leh oo doonaya inuu helo caymis oo ay diideen Shirkadaha Caymiska Gawaarida ee kale, Caymiska Guud ee Qaranka ayaa kugu habboon. Waxaad heli kartaa xigasho oo waxaad ku iibsan kartaa caymiskaaga digitally ahaan meelo ka mid ah Mareykanka iyo Guud ahaan Qaranka ayaa xitaa xamili doona xereynta foomka SR-22 maamulka shati siinta gobolkaaga haddii loo baahdo.
Si kastaba ha ahaatee, shirkadu waxay leedahay daacadnimo liidata ee adeegga macmiilka waxayna aad uga qaalisan tahay shirkadaha kale ee caymiska ee halkaas ka jira. Haddii aad haysato diiwaanka wadista baabuurka wanaagsan waxaad ka heli kartaa ikhtiyaar ka fiican meel kale, iyadoo la eegayo Dib -u -eegista Caymiska Guud ee Qaranka waxaan rajaynaynaa inay iftiimisay shirkadda.
thebalance.com - Dib -u -eegista Shirkadda Caymiska Guud ee Qaranka
Investopedia.com - Dib -u -eegista Caymiska Baabuurka Guud ee Qaranka
nerdwallet.com - Dib -u -eegista Caymiska Guud ee Qaranka 2021
en.wikipedia.org - Caymiska Guud ee Qaranka
Get Lacag La Siiyay Si Aad U Hesho CDL -kaaga: Sida Uu U Shaqeeyo | Tababarka CDL
Sida Loo Sameeyo Lacag Wadista Wadista Lyft | Hagaha 2021
Caymiska Daryeelka Muddada Dheer 2021 | Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka | Siduu U Shaqeeyo